Sezvo ini ndichitarisa kumashure kune rekupedzisira gore, hazvisi zvishoma kupfura kunoshamisa. Kutenda hakusi zororo chairo zvachose usati watanga kutenda Mwari… maita henyu Mwari! Makandiropafadza zvechokwadi nemhuri yangu gore rino. Mwanakomana wangu nemwanasikana zvipo zvakakurisa zvandisati ndambowana muhupenyu hwangu. Ini handisi kugara ndiri baba vakanyanya kunaka pasirese - dzimwe nguva ndinoshaya mikana nekuda kwebhizinesi - asi hazvigone kutora kubva pamanzwiro andinoita. Kana ndikarasa zvese mangwana, vana vangu vangadai vakaramba vachinyemwerera pachiso changu.
Ini ndakatanga kunyora rondedzero yevanhu nemabhizinesi ekutenda gore rino uye zvakatendeseka zvakatyisidzira ini ... mushure meanenge makumi mashanu, ndakatanga kudikitira kuti ndingakanganwa mumwe munhu! Kune boka repakati reshamwari randinoshanda naro randinofanira kutaura, kusanganisira Adam Mudiki kubva Kubatanidza Nhare, Maka Ballard we Bark Mallard naJason Carr kubva Mukombe weBean. Ndakashanda nevarume ava mazuva ese pamwedzi mishoma yadarika uye ivo vakandifadza, kundipa nguva yakaoma, uye kundikurudzira kuti ndiite zvakakura uye zvirinani. Zvitenderedze nevanhu vakanaka uye iwe unogara uchibudirira.
PS: Maka ari kudzokera kuSan Diego mushure meKutenda. Mark achasuwa uye ndine urombo kuti hatina kukwanisa kukwirisa bhizinesi rake uye tibudirire muno muIndipolis… rave riri gore rakaomarara kune vakawanda.
Semazuva ese, blog haisi yakawanda svikiro kunze kwekunge vanhu vateerera uye votora chikamu. Ndiri kutenda nekuramba ndichikura kuverenga kwe Martech Zone uye kune iwo matsva mabloggi avo vakapa zvimwe zvemhando yepamusoro uye manzwi akasiyana pano.
Ini handikwanise kuita ichi chinyorwa ndisina kutenda Chris Baggott uye Kuwedzera. Ndingadai ndisina kukwanisa kuvhura bhizinesi iri pasina rutsigiro rwavakapa. Kutenda Kyle Lacy neintro yekuWiley iyo yakazoshanduka ikaita bhuku randiri kunyora. Uye, hongu, nekuda Chantelle Flannery yekundibatsira mukuita kuti bhuku rinyorwe!